Fitsaram-bahoaka tany Befandriana Avaratra : navoakan’ny olona tao amin’ny hopitaly dia novonoina | NewsMada
Fitsaram-bahoaka tany Befandriana Avaratra : navoakan’ny olona tao amin’ny hopitaly dia novonoina
Fitsaram-bahoaka indray tany Befandriana Avaratra! Omaly maraina, navoakan’ny olona tao amin’ny hopitaly any an-toerana ny roa lahy voalaza fa jiolahy, tany an-toerana. Niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany ireo, ary tsy namelan’ny olona raha tsy maty. Daroka, vely kibay, samy nanala ny fony teo ny olona marobe. Tsy vitan’ny mpitandro filaminana intsony niaro ireo roa lahy ireo. Nentin’ny hatezerany loatra ireo olona tany Befandriana Avaratra ka tsy hay tohaina.
Araka ny vaovao azo, nanafika mpivaro-mandeha tany an-toerana ny andian-jiolahy maromaro. Ireo roa lahy ireo no azon’ny mpitandro filaminana ny alahady alina rehefa natao ny fanarahan-dia. Naratra ireo vokatry ny fifanenjehana sy ny fisamborana, ka naiditra hopitaly. Henon’ny olona ny fitondrana ireo roa lahy tao amin’ity hopitaly ka nirohotra teny izy ireo. Raikitra ny tabataba ary nihamaro ny vahoaka teo an-toerana. Araka ny vaovao, tampotampoka teo, nisy namoaka tao ireo ary nanao fitsaram-bahoaka avy hatrany. Efa maty ireo vao tonga ny mpitandro filaminana.
Tamin’ity taona ity no azo lazaina fa betsaka indrindra ny fitsaram-bahoaka teto amintsika. Anisan’izany ny tany Mampikony ny volana novambra teo, izay niafara tamin’ny fifandonana teo amin’ny zandary sy fandorana tranona zandary. Ny tany Ankazomborana, ny volana oktobra lasa teo ihany, nanafihan’ny olona anarivony ny tobin’ny zandary. Ny tany Vavatenina, telo lahy nisandoka ho zandary matin’ny fitsaram-bahoaka, ary farany talohan’izao ny tany Mananjary, izay namonoan’ny olona vehivavy iray voalaza fa nanota fady.
Santionany ihany ireo, fa mbola ny fitsaram-bahoaka ity taona 2016 ity. Endrika maneho ny hatezeran’ny olona, ny alahelony, ny krizy iainany ary ny tsy fahatokisany ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Naneho hevitra ihany ny mpitondra ny amin’ny tsy tokony anaovan’ny vahoaka izany, saingy toa antso an’efitra ihany izany.